ငါပျံသန်းဘို့နောက်ကျ - ဘာလုပ်ရမှန်း?
ဘဝကအံ့သြဖွယ်များအပြည့်အဝပါ! တောင်မှသငျသညျဆိုပါက - အလွန်တိ, ကသောသင်ထိုသို့သောမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်မယ့်အာမခံချက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်အစားထိုးကုသမှုများအတွက်အသွားအလာယိုထဲမှာဖမ်းမိရှုပ်ထွေးအချိန်, ယခင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေး, etc ဖြစ်ပွားခဲ့သည်: လေယာဉ်ပေါ်မှနှောင့်နှေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်နိုင်ပါတယ်များအတွက်အကြောင်းပြချက် တိကျသောအခြေအနေများတွင်ပြုမူဖို့ဘယ်လို, ဒီဆောင်းပါးကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
မှာနှောင်းပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာ မှတ်ပုံတင်ရေး ;
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ဆင်းသက်အောက်ပါ algorithm နှင့်အတူညီကို run:
ရယူ နေတဲ့ဘော်ဒါ pass ;
လာသောအခါတွင်နိုင်ငံတကာလေယာဉ်ခရီးစဉ် - နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုထိန်းချုပ်;
ကြော်ငြာဆင်းသက် - လေယာဉ်ပေါ်တွင်အောက်ပါ။
ပြည်တွင်းရေးလိုင်းများပေါ်တွင်: start -2နာရီထွက်ခွာမှီ, အဆုံး - 30 အတွက် - မထွက်ခွာမှီမိနစ် 40;
ယင်းအစ 2.5 နာရီ, 40 မိနစ်၏အဆုံး: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းခရီးစဉ်များအတွက်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းကြိုတင်ထွက်ခွာသွားရန်မအစောပိုင်းက 23 နာရီထက်ကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့်အွန်လိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်လေယာဉ်ပေါ်ရနိုင်သည်။ အတော်များများကလေဆိပ်ဧည့်ခံနှောင်းပိုင်းတွင်ခရီးသည်များလည်ပတ်။ ရုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်. $ 60 (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတန်းစားခရီးသည်ပုံမှန်အားအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ရန်) ကုန်ကျဆိုတာကိုသတိရ။ အထူးတန်ပြန်၏မရှိခြင်းအတွက်လေယာဉ်ချွတ်သည်အထိဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်သယ်ဆောင်ရသောလေကြောင်းလိုင်း၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး, ရှာတွေ့ထားတဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေသည်။ သို့သော်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့်သွားကြဖို့ရှိခြင်းအထူးသဖြင့်အခါ, ကျနော်တို့ကို pre-လေ့ကျင့်ရေးအတှကျလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှိကွောငျးကိုအောကျမေ့သင့်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လေယာဉ်ကိုအနည်းငယ်အချိန်ထွက်ခွာမှီ, count ကဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်မရနိုင်မယ်ဆိုရင်။
ဤအခြေအနေသည်လျော့နည်းဘုံဖြစ်ပါသည်, သို့သော်, သင်ဘော်ဒါတို့အတွက်နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ 20 မိနစ်ထွက်ခွာမတိုင်မီ - ဆင်းသက်၏အချိန် 15 အဆုံးသတ်ထားသည်။ မှတ်ပုံတင်မထားတဲ့, ဒါပေမယ့် speakerphone အပေါ်ဘော်ဒါခေါ်ဆိုခမှာပေါ်လာဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလေကြောင်းလိုင်းကိုယ်စားလှယ်မှလျှောက်ထားရန်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြစ်သင့်သည်။ ခြွင်းချက်ကိစ္စများတွင်, သင်သင်္ဘောပေါ်တွင်တင်နိုင်ပါတယ်။
လေယာဉ်ကိုသင်စရာမလိုဘဲပျံသန်းလျှင်, သင်ချက်ချင်းလေကြောင်းလိုင်း၏စီမံခန့်ခွဲသူကိုရှာဖွေရပေမည်။ ယင်းလက်မှတ်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်သူကအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်းထဲတွင်သင့်ရဲ့လက်မှတ်ပါလျှင်, သင်၏နောက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များပေးပို့ခြင်း posodeystvuet ။ ဒါပေမယ့်သံသယစေအသစ်တစ်ခုလက်မှတ်မိမိစရိတ်ရပါလိမ့်မယ်ဝယ်ယူရန်။ ထွက်ခွာသွား၏ပွင့်လင်းသည့်ရက်စွဲနှင့်အတူလက်မှတ်အတွက်ဝန်ပိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကြောင့်နှောင်းပိုင်းကဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ကုမ္ပဏီလာမည့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အပေါ်သူ့ကိုထားဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနေ့ရက်သည်အခြားလေယာဉ်ခရီးစဉ်များမရှိခြင်း, သင်ဟိုတယ်ထဲမှာနေရာချခြင်းနှင့်နောက်နေ့ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။
သင်သည်အခြားလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပျံသန်းပိုင်ပါကလေယာဉ်နှောင့်နှေးအပေါ်တစ်ဦးအမှတ်အသားလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ရပါမည်။ ထိုအခါဘားလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုသင် hit နှင့်ယခင်လေယာဉ်များ၏အမှတ်အသားနှောင့်နှေးနေသည်မပြပါဘူးတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုသွားပါ။ သင့်အနေဖြင့်လာမည့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုပေးပို့ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းကြသည်! ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအပိုပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျပစ္စည်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လျော်ကြေးခွင့်ရှိသည်။ ပြည်နယ်, ယာဉ်မောင်းယူသို့မဟုတ်ရက်စွဲပါရှိသည်သော taximeter လက်ခံရရှိ, စစ်ဆေး, အချိန်သေချာပါစေ။ ကားတစ်စီးနံပါတ်နှင့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသတင်းအချက်အလက်။ ရထားများ၏နှောင့်နှေးလက်မှတ်ပေါ်တွင်တင်လိုက်တဲ့အခါရထားဘူတာမှာရောက်ရှိလာခဲ့ဘယ်လောက်, အကြီးဖွဲ့စည်းမှု mark ။ အောက်ပါအမိန့်တက္ကစီဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုထွက်သတ်မှတ်ပေးသောခရီးသည်များ၏ရထားများအတွက်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဦးခေါင်းမှစာတစ်စောင်ရေးသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စတာတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု :. လက်မှတ်တွေသက်သေစာရွက်စာတမ်းများများ၏တောင်းဆိုမှုများဖြည့်တွဲမိတ္တူ, လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကသင်ဟာခရီးသွားလာ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပါမစ်၏ကုန်ကျစရိတ်လျော်ကြေးပေးဖို့တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ဟိုတယ်နှင့်အခြားသူများပေးဆောင်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျနှောင့်နှေး၏တစ်နာရီလျှင် 3% နှုန်းမှာပြစ်ဒဏ်ပေးချေရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အဆိုပါပြောဆိုချက်ကိုန်ဆောင်မှု၏ဦးခေါငျးကိုသင့်ရဲ့မိတ္တူအရေးဆိုမှုများလက်ခံရရှိမှု၏စံချိန်တင်အောင်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ထပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးအမှတ်အသားထားရန်ငြင်းဆန်ခဲ့လျှင်, သင်ပြောဆိုချက်ကိုနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါတစ်ဦး entry ကိုဖြစ်စေလျက်, နှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှသင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်သူနှစ်ဦး၏သက်သေများ၏ထောက်ခံမှုဆီအကူအညီတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားသောအက္ခရာအားဖြင့်တိုင်ကြားမှုကိုပေးပို့ဖို့ - တစ်ခု option ကိုအမျှ။ သင်၏ပြေစာနှင့်အသိပေးစာကယ်ဖို့သေချာပါစေ! ဝန်ဆောင်မှုကမတုံ့ပြန်ပါသို့မဟုတ်သင်လက်မခံနိုင်လမ်းများအတွက်ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေလျှင်, တရားရုံးကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရသည်။
နေးဒါ - ရေငုပ်
တစ်ဦးနတ်သမီးပုံပြင်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့: 15 ကို Magic အင်္ဂလိပ် Eco-အိမ်များ
ဖက်ရှင် Ring ကို 2015
ကလေးတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးကအနီရောင်လည်ချောင်း - ကုသခြင်းထက်?
Atheroma - ကုသမှု
စစ်တိုက် Tel: အဟောင်းနှင့်အသစ် "Baywatch" နှိုင်းယှဉ်
Horsetail - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်က Short သားအိမ်ခေါင်း